07 | janvier | 2022 | InfoKmada
Accueil 2022 janvier 7
Archives quotidiennes: 7 janvier 2022
Covid-19 : tsy vahaolana intsony ny fidirana amin’ny fihibohana
InfoKmada - 7 janvier 2022 0
Tsy vahaolana indrindra ho an’ny toekaren’I Madagasikara intsony ny mety ho fidirana indray amin’ny fihibohana. Hitombo ny tsy an’asa ary hiakatra lavitra ny vidim-piainana. Ny fanamafisana ny fampitam-baovao mba hialan’ny rehetra amin’ny tsaho manakorontana ny saina no tokony himasoan’ny fanjakana raha ny fanazavana.
FIZAHANTANY ANOSY : nomena fiofanana ireo mpisehatra
Miisa 1019 ireo mpisehatra amin’ny fizahantany ao amin’ny Faritra Anosy nahazo fiofanana tamin’ny alalan’ny tetikasa MIATRIKA. Tetikasan’ny fanjakana Malagasy amin’ny alalan’ny PIC-2 natao hanarenana ireo mpisehatra amin’ny fizahantany vokatry ny Krizy nateraky ny COVID-19.
Organisme rattaché : miverina eny amin’ny Minisitera mifamatotra aminy ireo mpiasa
Nofoanana ireo Organisme rattaché mandany volam-panjakana izay efa misy amin’ireo minisitera no manao ny asany, araky ny tapaka nadritry ny Filankevitry ny Minisitra omlay. Miverina eny amin’ny ministeran’ny fiaraovam-pirenena avokoa iroe mpiasa teo amin’ny OTME raha ny fanazavana, ho any ireo organisme rattaché miisa 3 miankina amin’ny Fiadidinana ny Primatiora miverina eny amin’ny ministeran’ny asa ny fampananana asa ireo mpiasa.
Banky iraisam-pirenena : naneho miharihary ny tsy fahaiza-mitantana eto Madagasikara
Foana avokoa hoy ny mpandinika fiainam-pirenena ireo fifanarahana rehetra amin’ny tetikasa vatsian’ny Banky iraisam-pirenena vola, taorian’ny fanasaziana navoakan’izy ireo mahakasia ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina Ivato. Tokony handray fanapahan-kevitra ihany koa ny Fanjakana Malagasy amin’ny orinasa nanao kolikoly ary haseho am-pahibemaso ho fantatry ny rehetra hoy ny Transparency International.
Ambohibao Antehiroka : 04 mianaka no maty vokatry ny fihotsahan’ny tany
Olona 4 mianaka no maty noho fihotsahan’ny tany teny Ambohibao Antehiroka ny Alarobia 05 janoary, tokony tamin’ny 9 ora alina, nandritry ny rotsak’orana naharitra. 5 mianaka izy ireo no niharan’ny loza, saingy avotra soa aman-tsara ny 1 tamin’izy ireo. Nananosarotra ny fitadiavana ny razana noho ny haizina.
Fanondranana volamena : malagasy 02 voasambotra tany Comores
Naiditra am-ponja vonjimaika omaly tany Kaomoro ireo 02 lahy voasaringotra tamin’ny fanondranana volamena an-tsokosoko 73kg. Efa nandefa ny demande d’extradition tany amin’ny firenena nahatratrarana azy ireo ny minisiteran’ny fitsarana ahafahana manohy ny fanadihadiana.